I-China SARS-CoV-2 (2019-nCoV) yokufumanisa isisombululo kubavelisi kunye nabathengisi | Jianma
Itekhnoloji ye-ASEA, isizukulwana esitsha se-acidic yeplatform yokufumanisa ngokukhawuleza ngokuzimeleyo okuphuhliswe yinkampani, ichanekile, ilula kwaye iyakhawuleza itekhnoloji ye-asidi yokufumanisa ngokukhawuleza, enokugqibezela yonke inkqubo ukusuka "kwisampulu kwiziphumo" kwimizuzu engama-35, kwaye uqaphele ukuphuculwa okubalulekileyo kokufunyanwa kwe-acid ye-acid ukusuka "kwinqanaba leyure" ukuya "kwinqanaba lomzuzu"
Inoveli coronavirus 2019 inoveli coronavirus inoveli coronavirus (nCoV) i-ORF1ab kunye nohlobo lwe-N zichongiwe kwii-swabs kwaye kurhanelwa ukuba iisampulu zamanzi ezihlanjululwa yi-bronchoalveolar ezivela kwisikrokro somqala esikrokrisayo kunye neesampulu zamanzi ezihlaselweyo ze-bronchoalveolar. Imveliso ifumene isatifikethi se-CE kwaye yangena kuluhlu olumhlophe lwezinto ezichasene nobhubhane ezicetyiswe yi-Ofisi yoMphathiswa Wezorhwebo. Izixhobo ezomeleleyo kunye nezingamanzi ziyahlangabezana neemfuno zeemeko ezahlukeneyo zokugcina, zikunika iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo.
Inkqubo entsha yokufumanisa isithsaba (ukuqhubekeka kwesampulu + yokukhulisa + isixhobo) se
I-Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. ayifuni iilebhu eziphambili, akukho adda l amanyathelo e-acid ekuchotsheni.
Isisombululo esitsha sokufumana isithsaba (isampulu yokuqhubekiswa + kokukhulisa + isixhobo) ayifuni ilabhoratri ephambili, akukho manyathelo e-magnetic bead nucleic acid, akukho mfuneko yesixhobo esikhulu sokukhulisa.
Yimizuzu engama-35 kuphela efunekayo kwiSampulu ukuya kwiMpendulo.
Kwisampulu enye, igcina iipesenti ezingama-70 zexesha ngokuthelekiswa ne-RT-PCR yemveli, kwaye yonyusa ukusebenza ngokukuko kwi-375%.
Iimveliso zineziqinisekiso zasekhaya kunye nesatifikethi se-CE, sinokubonelela ngeseti epheleleyo yeemveliso ezithunyelwa ngaphandle ngokuthe ngqo.
Uphilile, kwaye awusalindi!
Ukukhutshwa okungafunekiyo ngokukhawuleza komgaqo olandelwayo ngolu hlobo lulandelayo:
Isixhobo: ND360 Inkqubo yePCR yokwenyani yexesha lokwenyani.
Ukukhutshwa: JM101 Ikhithi yokukhupha i-acid ngokukhawuleza.
Ukufumanisa:JM001 I-SARS-CoV-2 nucleic acid detection kit (Indlela ekhawulezayo yePCR Fluorescence).
[Uhlobo lokuhambisa ngenqanawe]
I-reagent ye-Lyophilized iyafumaneka ukuxhasa ubushushu obuqhelekileyo bokuhamba
chwetheza Isimo esiqinileyo
Ukugcina kunye nemowudi yokuhamba ubushushu obuqhelekileyo bomoya
Ubungakanani bebhokisi 25cm * 20cm * 18 cm
Inani leekiti Iibhokisi ezili-10
ubunzima 5 kg
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Ikhithi yokuKhupha iAcid Nucleic ekhawulezayo, Ikhithi yasimahla yokuSusa, Iikiti zeChina ezikhawulezayo zovavanyo, I-Canine Parvovirus (Cp),